RC Cars nokuti Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 Rotating 4WD Off Road Double vakatsigira Rotating Tumbling - 2.4Ghz High Speed ​​Rock Crawler Vehicle pamwe Headlights Children Birthday Zvipo RC Car nokuda Kids - Jomo Technology Co., Ltd
RC Cars nokuti Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 Rotating 4WD Off Road Double vakatsigira Rotating Tumbling - 2.4Ghz High Speed ​​Rock Crawler Vehicle pamwe Headlights Children Birthday Zvipo RC Car nokuda Kids
1.High nokukurumidza uye kure road: The motokari ine mbiri Motors simba pamwe 4WD, nechokwadi kumhanya kwayo. Very mavhiri kuchinja, zviri nyore kuti nokukurumidza muchichinjana.
2.Best chipo nokuti vana: pamwe 2.4GHz redhiyo kure kudzora hurongwa, asi RC motokari ndiro zuva akakwana, Christmas zvipo vana.
3.All nemhando mazano: zvinoshamisa 360 dhigirii asakura flipping design, akakodzera vana venyu kana toyi motokari Anoda. Double mativi vaimhanya, mberi, shure, kuruboshwe, tsaukirai kurudyi, 360 dhigirii tumbling flipping. RC motokari chete anoramba kuenda pasinei nayo anorova kana sei minda kukupa inotonhorera yakasiyana ruzivo!
4.High yepamusoro zvinhu: yepamusoro mapurasitiki, makasimba uye hunogara motokari muviri, zvimwe ruggedness uye crashworthiness. Matai wakaumbwa rabha, nyore kukurira Outdoor ezvinhu.
5.Guarantee: motokari anoshandisa 3.7V 400mAh rechargeable bhatiri (yaisanganisira) pamwe USB wire (zvaisanganisira), 15 - 20 mins kuridza nguva, 2 maawa Charging nguva. KOOWHEEL kupa zvizere dzosera kana kuchinjana itsva imwe kuitira mukati kwemazuva 30. Akagadzirira Achipindura muna 24 hours.So kuwedzera pangoro zvino!
Previous: RC Cars KOOWHEEL 1:16 Scale 2WD Off Road Remote Control Cars pamwe 2 Rechargeable Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck chikara High Speed ​​Crawler USB Charger RC Car nokuda Vakuru uye Kids (Blue)
2.4G kure CONTROL CAR
2.4 GHz redhiyo kudzorwa: simba Anti chipingaidzo, hunoita mota akawanda kuti muchimhanya pamwe panguva uye nzvimbo. Kana wawana zvakawanda 2 KOOWHEEL Videocon rori, ndiko kunonakidza zvikuru kumhanya motokari dzakawanda parutivi.
3 zvikonzero pazasi kuti pfupi-motokari-nguva bhatiri: The kuchaja nguva mupfupi kutsigira machisa.
Radio dzinovhunura: 2.4GHz
Charging nguva: 180mins
Battery upenyu: anenge 15mins
Control Distance: 100 tsoka
Car bhatiri: 3.6V 600mA bhatiri
Battery Remote kuzvidzora: 2 * 1.5V AA mabhatiri ( Not Included)
rutina: Dzoka kuruboshwe, tsaukirai kurudyi, pamberi, shure
Package Dimensions: 16.1 X 11 X 3.9 nemasendimita
Net uremu: 1,1 pondo
Service uye Warranty:
-mwedzi 12 yokutsiva garandi, mupenyu zvokugadzirisa.